”Waxay ku tababarteen sida ay hal mar nukliyeer noogu duqayn karaan!” – Ruushka oo ka hadlay dhoollatus hallis oo uu Maraykanku sameeyey! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waxay ku tababarteen sida ay hal mar nukliyeer noogu duqayn karaan!” –...
”Waxay ku tababarteen sida ay hal mar nukliyeer noogu duqayn karaan!” – Ruushka oo ka hadlay dhoollatus hallis oo uu Maraykanku sameeyey!
(Moscow) 24 Nof 2021 – Wasiirka Gaashaandhigga Ruushka, Sergey Shoigu oo shalay Moscow ku qaabiley dhiggiisa Shiinaha, Wei Fenghe, ayaa ku dooday in Maraykanku uu 30 howlgal oo ay ku lug leeyihiin dayuuradaha sameeya duqaymaha istaraatijiga ay ka sameeyeen meel aan ka fogayn xadka Ruushka.
Wasiirka ayaa sheegay in arrintan oo dhacday bishii hore ay ku dhowaad 3 jeer ka badan tahay howlgalladii hore ee dhoollatuska ahaa ee la sameeyey xilligan oo kale sanadkii tegey.
Shoigu ayaa intaa raaciyey in dhoollatuska Maraykanka oo loogu wanqalay magacadded ”Global Thunder”, in ilaa 10 dayuuradood oo ah kuwa culus ee sameeya duqaymaha istaraatijiga ihi ay ku tababaranayeen sida ah mar qura nukliyeer ula dhici lahaayeen Ruushka min bari ilaa galbeed, iyagoo Ruushka u jira masaafo ka yar 20km.
Wuxuu kale oo sheegay in iskaashiga amaan ee Ruushka iyo Shiinuhu uu sii xoogaysanayo xilli ay aad usii kordhayso “xasaradda siyaasadeed ee dhuleed (geopolitical) isla markaana ay sii badanayso fursadda uu dagaal ku dhici karo.”
Warkan ayaa imanaya xilli ay Galbeedku ay Ruushka ku eedaynayaan inuu ciidamo soo dhoobay xadka Ukraine oo ay xitaa sheegeen inuu ku duuli karo, halka uu isaguna ku eedaynayo inay dhoollatus ka wadaan dalal isaga deris la ah.
Previous articleJabuuti oo dayuuraddii 2-aad oo rakaab ah ka heshay dalka Shiinaha + Sawirro
Next articleCillad laga helay dayuurad uu raaci lahaa MW Maraykanka ee Joe Biden